Regolith: Desktọpụ Desktọpụ nke oge a ma rụọ ọrụ dabere na i3wm | Site na Linux
Taa, dị ka ọ dị na mbụ na site n'oge ruo n'oge, anyị ga-enyocha otu ọzọ n'ime ọtụtụ Ebe Desktọpụ (DEs) dị. Taa, anyị ga-ezukọ ma kwuo maka DE ọzọ, dị ọhụụ ma dịkwa akụkụ na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ mmasị, Kedu aha Regolith.
Regolith dị ka «Desktọpụ Environment»N'etiti ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị ọ nwere na enwere ike ikwu banyere ya, bụ na e wuru ya site na iji ngwakọta mara mma na arụmọrụ I3wm na Gnome. Na mgbakwunye, ọ na-abịa arụnyere na ndabara, na a Linux Distro nwere otu aha, dabere na Ubuntu, na onye ikpeazụ version kwụsiri bụ 1.5.
Otú ọ dị, tupu ịbanye n'okwu nke Regolith, anyị na-ahapụrụ gị ụfọdụ njikọ nke akwụkwọ anyị ndị gara aga metụtara nke gara aga Gburugburu Ebe Obibi, ebe ha nwere ike ịgbasawanye ihe ọmụma ha banyere ha: Atọ n'Ime Otu, Moksha, Deepin Desktop Environment ma ọ bụ DDE, Pantheon, Budgie Desktọpụ, GNOME, KDE Plasma, XFCE, pawuda, MGBE, Lxde y NXT.
1.1 Gịnị bụ Regoliht?
Gịnị bụ Regoliht?
Dị ka Regolith Project na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya dị ka:
"Regolith bụ okpokoro desktọọpụ nke oge a nke emere iji nwee ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa site na mbenata ọgbụgba na mmemme na-enweghị isi. Ewubere na Ubuntu, GNOME, na i3, Regolith na-adabere na ntọala siri ike ma na-agbanwe agbanwe".
Na mgbakwunye, ha depụtara n'ụzọ zuru ezu ihe ndị a atụmatụ na arụmọrụ nke otu:
A minimalist Desktop Environment with a functional user interface, nke na-enye ohere mgbanwe dị mfe na mmụba, n'ọtụtụ n'ime ihe ya. Na ekele niile maka nhazi nke njikwa nke usoro GNOME na arụmọrụ na-arụpụta nke i3-wm.
Emegharịrị gburugburu ebe ọrụ maka iji ya na mmụta nke ndị ọrụ ọhụụ, ekele maka interface ya dabere na njikwa Window nke ụdị "Window Window Manager".
A interface njirimara eserese nke dị mfe iji hazie ma melite site na nhazi Xresource na-agbanwe agbanwe.
Mmekọrịta magburu onwe ya na Linux Ubuntu Distro, na-enye ohere iji Storelọ Ahịa App yana Nchịkọta Ihe Nlekọta. Agbanyeghị, enwere ike itinye ya n'adabereghị na GNU / Linux Distros ndị ọzọ ewepụtara ma ọ bụ dakọtara na Ubuntu.
Ọganihu dị egwu na nke ọhụụ na-enye ohere ngbanwe dị mfe nke Njirimara Onye Ọrụ ya (UI), yana ụdị ụzọ mkpirisi keyboard dị n'ụzọ dị mma. Na mgbakwunye, ọ na-enye edemede ụlọ na ngwugwu metadata, nke na-enye gị ohere ịgbanye ya na Nkesa nwere ya.
Ebe ọ bụ na, ya ukara website bụ ọtụtụ asụsụ ma ọ na-abịa nnọọ ezu na Asụsụ Spanish, ị nwere ike ịnweta ọdịnaya niile emelitere na nseta ihuenyo (nseta ihuenyo), akwụkwọ (nduzi / ntuziaka), isi mmalite (nbudata site na ụdị ndị dị ugbu a), n'etiti ozi ndị ọzọ bara uru.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Regolith abịa na ndabara na a Ubuntu dabeere Linux distroOtú ọ dị, site na ya Ntinye ego na GitHub enwere ike ichi iji iwu debuild nyere site na ngwugwu devscripts ma ọ bụ site na ha Ebe nchekwa PPA na LaunchPad.
Maka okwu ikpe azụ, yana dị ka ekwuru na njikọ ahụ, usoro ị ga - agbaso bụ:
Banyere Ubuntu na nkwekọrịta
Cheta na: Can nwere ike dochie okwu "nkwụsi ike" maka "ntọhapụ".
Banyere Debian na nkwekọrịta
Mepụta faịlụ ngwanrọ sọftụwia (repositories) ma tinye usoro ọdịnaya ndị a:
Cheta na: Can nwere ike dochie okwu "groovy" maka: Baịbụl hiwere isi n'ebe, eoan na bionic, dị ka gị mma na / ma ọ bụ mkpa.
Mee iwu ndị a:
Cheta na: Gbalịa ka ị ghara ịnwebu ihe arụnyere ma ọ bụ i3wm ni i3wm-ọdịicheỌ bụrụ na ọ dị mkpa wepụ ihe niile tupu ịwụnye, iji zere nsogbu n'ihi esemokwu ịdabere na ndị ọzọ.
Na na ikpe abụọ ahụ, ya bụ iji Ubuntu na nkwekọrịta o Debian na nkwekọrịta, I nwekwara ike wụnye ihe ọ bụla ọzọ nke ẹdude nchịkọta ke kwuru repository ka zuo ezu ụmụ afọ nchịkọta nke Regolith.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Regolith», ọzọ dị obere mara, obere na ngwa ngwa Desktọpụ Environment (DE) dabere na I3wm na Gnome, nke na-abịa na ndabara, na a GNU / Linux Distro nwere dabere na - Ubuntu, n'okpuru otu aha Regolith Linux; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Regolith: Ebe obibi Desktọpụ nke oge a ma rụọ ọrụ dabere na i3wm
A tọhapụrụ KDE Ngwa 20.12 na ndị a bụ akụkọ ya